Brazil inokodzera misika yemasheya epasi rese | Ehupfumi Zvemari
Brazil yakanaka kune epasi rese misika yemasheya
Pachokwadi, pave nevazhinji varimi vakafunga kuti uyu mutema Gumiguru ungaguma zvakatonyanya mumisika yemari. Semhedzisiro yemhedzisiro yakaitika muBrazil uye izvo zvakaratidza kuti mumiriri akasimba Jair Bolsonaro uve mutungamiri mutsva wenyika ino ichibuda kubva Svondo yapfuura. Sarudzo idzi dzaive dzichikonzera kusagadzikana mune tarisiro yevarimi vashoma nepakati. Kunyanya muSpain nekuda kwekubatana kukuru kwechikamu chakanaka chemakambani akanyorwa pamisika yemari yenyika ino yeSouth America.
Zvakanaka, zvinopesana nekufungidzira, sarudzo dzeBrazil dzakapa kusimudzira kusingatarisirwi kumisika yepasi rese yemasheya. Iko main stock indexes akagashira zvine mwero anowedzera kukunda kwemutungamiriri-bapiro mutungamiri. Mapesenti anga akakwira muBovespa yeBrazil ayo akagadzira kuonga padyo ne3% sarudzo iyi iri kutambirwa zvakanaka nemavhoti evagari. Iko kumanikidza mutengi Ichi chiitiko chave chiri chekutanga chiitiko icho chakave nechikamu chakakura chevashoma nevapakati varimi mukufungira.
El BOVESPA Ndiyo huru indekisi yemari muBrazil uye inoita imwe yemapoinzi evashandisi veLatino. Mupfungwa iyi, mukati meChipiri ichi yakagadzirisa zvigaro mushure mekugadzira rally yekusimudzira iyo yakamira nekuda kwekusarudzika kwayo. Bovespa yakarasika ingangoita 3% kuti iende padhuze nematanho ainayo pamakumi masere nemazana masere ezviuru mukuita kwakapfuura kwakatungamira kunzvimbo dzekukwira kusvika pamapoinzi zviuru makumi masere nemasere, danho risingaonekwe mumakore achangopfuura uye riine huwandu hwepamusoro hwekutengesa uye mune chero mamiriro ezvinhu, pamusoro avhareji yakaitika mukati memwedzi waGumiguru.
1 Sarudzo muBrazil: Stock Market Inokwira
2 Kukosha kwemusika wemusika weRio de Janeiro
3 Migumisiro kumakambani eSpain
4 Ibex 35 inomuka pamberi pemhedzisiro
5 Nzira dzekudyara
6 Zvimwe zvigadzirwa zvemari
Sarudzo muBrazil: Stock Market Inokwira
Zvirokwazvo, kufungidzira kwevamwe vaongorori vezvemari kuti kukunda kwemutungamiri wenyika nemumiriri wekodzero yekunyanya muBrazil hakukwanise kukonzera kuderera kukuru mumusika wemari hauna kuzadzikiswa. Izvi hazvina kuitika, asi zvakapesana uye kusvika pakange zviri nenzira iyi yekuti musika weBrazil wemusika wave uri mumwe we zvinobatsira mumwedzi uno waGumiguru wave kuda kupera. Pamusoro pematanho mumisika yemasheya yekondinendi yekare iyo yakawandisa yakaratidza kurasikirwa kwakanyanya.
Pane izvi zvakakosha kuti usimbise kuti kuenzana kwenyika ino kwakazadzisa imwe yemazamu evashambadziri uye ndiko kutengesa nenhau mushure mekutenga netarisiro yemhedzisiro yeSvondo. Zvese izvi uye nekumirira kuti hurumende nyowani ichave sei munzvimbo ino inokosha yenzvimbo yepasi. Yakagadziriswa, kune rumwe rutivi, nekuderera kwakapinza kwakaitika mu Wall Street uye izvo zvakagadzirisa shanduko yemari dzeBrazil.
Kukosha kwemusika wemusika weRio de Janeiro
São Paulo Stock Exchange kana Bovespa ndiyo yechinomwe uye yakakosha kwazvo stock exchange munyika, uye yekutanga kubata chinzvimbo ichi muAmerica. Kukosha kwayo kunotsanangurwa nenyaya yekuti indekisi inoratidza hunhu hwechengetedzo huru inotengeswa mu Sao Paolo Stock Exchange. Iyi indekisi inoratidzirwa nekusava nekugadziriswa kwenzira kubva payakatangwa muna 1968.
Yakanga iine yakajeka mamiriro ekudzikira kwemwedzi yakawanda semhedzisiro yemisiyano yakakomba muhupfumi hweBrazil. Kusvika pakuti ine imwe yeakanyanya kuderedzwa mumakore apfuura. Kana iwe wakadyara mari mumusika wepasi rese uyu, iwe uchasvika pamhedziso yekuti warasikirwa nemari yakawanda kupfuura yaitarisirwa kubva kutanga kwekushanda mumusika uno wakakodzera. Iko kune nyaya dzehuwori, kusagadzikana kwezvematongerwo enyika uye kudzikisira kwemari yako yemuno, chaiye weBrazil, anga ari mamwe madhinominesheni avo akajairika panguva ino yenguva.
Migumisiro kumakambani eSpain
Mumwe wevabatsiri vakakura mukukunda kwesarudzo kwezvematongerwo enyika Jair Bolsonaro anga ari mamwe emakambani akanyorwa mune yakasarudzika index yeSpanish equities, Ibex 35. Santander, BBVA, Iberdrola kana Telefonica pamusoro pekukoshesa kwemazuva ano pamberi pesarudzo apo misika yezvemari yakadzora kukunda kwakajeka kwemumiriri anochengetedza. Icho chikonzero chiri nekuda kwehurongwa hwehupfumi hwaanoda kuzadzikisa muBrazil kusimudzira hupfumi uye izvo zvinoenderana nechirongwa chekushambadzira icho varimi vanofarira kwazvo.
Mukati meichi chirevo chizere, hazvishamise kuti mamwe masheya emunyika ave mamwe evakanyanya kubatsirwa kubva mukumanikidza kwekutenga uku mumisika yemari. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kubva pakuvhura kusvika mushure mepakati-chikamu, makambani eSpain ane zvido zvikuru muBrazil ave neakanakisa mwero mukuongorora yemitengo yavo. Kusvika padanho rekuti rakagadzira zvakakosha mu musika wemasheya mushure mekudzidza kwekukunda kwaBolsonaro munyika yeIbero-America. Pamusoro pemhedzisiro yakapihwa nemakambani asina kuvapo munyika ino yeAmerica.
Ibex 35 inomuka pamberi pemhedzisiro
Mhedzisiro iyo chiitiko chezvematongerwo enyika chakagadzira hachina kutora nguva yakareba ichiuya mumisika yemunyika. Nekuti zvirizvo, Telefónica yakaona kuwedzera kwekukomba kwe2%, uye pamusoro pevhareji yenyika. Pane zvinopesana, mamwe maitiro eiyo inosarudzika indekisi yemusika weSpanish, senge nyaya yaBanco Santander, yakakonzera kukwira kwavo panguva iyoyo chaiyo kubata iwo huwandu hunofungidzirwa hwe3%, sezvakaita mamwe makambani akanyorwa se Mapfre neMasikati uye padiki padiki Iberdrola. Mune izvo zvave kutorwa sezuva rakanaka kune zviyero zvemunyika mushure memwedzi unotyisa muna Gumiguru.
Kune rimwe divi, kune vazhinji vanoongorora nezvekodzero vanotenda kuti kuuya kwaBolsonaro musimba kuri kutengesa zvakanyanya pamusika wemasheya sezvo riri zuva risina makuru macroeconomic mareferensi. Izvi zvakabatsira mimwe misika yemasheya pasi kujoinha iyi yakasarudzika kutenga ikozvino nevashambadzi vadiki nepakati. Hazvishamise kuti musika weBrazil wemusika ungangove chimwe chezvakanaka kwazvo kushamisika kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamisi kuti zvinofanirwa kuyeukwa kuti anga ari mumwe wevakarangwa zvakanyanya mumakore apfuura.
Chero nzira, kana chinangwa chako chiri chekuenda kumusika wepasi rose wezvemari, zvakakosha kuti iwe uzive kuti iwe unofanirwa kuzviita nekungwarira kukuru nekuti ndeimwe yeakanyanya kushanduka wenyika. Iko mutsauko uripakati pemitengo yaro yepamusoro nepashoma mune imwechete chikamu chemusika wemasheya chakakura kwazvo uyezvezve kupfuura muzvikwere zvekondinendi yakare. Ndokunge, iwe uri muchinzvimbo chekuwana mari yakawanda mukushanda, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete chekuisiya munzira munzira pfupi kwazvo yenguva.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iwe unogona kuvhura zvinzvimbo mumusika weBrazil kuburikidza nezvimwe zvigadzirwa zvemari zvisina chekuita zvakananga nekutengesa uye kutenga kwemasheya pamusika wemasheya. Imwe yeaya mazano ezvekudyara anoitwa neiyo Investment funds. Ivo vanozove iwo emari inoshanduka uye vane yavo portfolio yekudyara inoenderana neiyi yemari pfuma. Ehezve, iwe unenge usina kana dambudziko kugutsa ichi chakakosha chishuwo sezvo makambani manejimendi anofukidza ino nzvimbo nenzvimbo dzakasiyana dzekudyara.
Zvimwe zvigadzirwa zvemari
Mari yacho haisiriyo yega zvigadzirwa maunogona kuvhura zvinzvimbo muBrazil. Zvakare ivo ETFs Zvichienderana nenzvimbo ino, vanowana ichi chinangwa, kunyangwe vachitanga kubva pazvakasiyana zano. Hazvishamise kuti mari yekuchinjana-inotengeswa musanganiswa pakati pekutenga nekutengesa migove pamusika wemasheya nemari yechinyakare yekudyara. Nezvakanakira izvo zvavanopa makwikwi emakomisheni kupfuura mamwe ese. Kunyangwe iwo achiitirwa mafupi mazwi ekugara. Kunyangwe mune chero mamiriro ezvinhu iri imwe yeimwe sarudzo iwe yaunofanirwa kuisa mari munyika ino.
Zvinogadzirwa kana zvibvumirano zvinobvumawo mukana uyu, kunyangwe zvichibva kunzvimbo dzine hukasha zvakanyanya mumamodeli akafumurwa kare muchinyorwa chino. Iko kwaunogona kuburitsa mibairo mikuru yemari kana iwe uchiziva mashandiro navo, asi zvakare siya akawanda ma euro munzira kana izvo zvinotarisirwa zvakagadzirwa kumagumo zvasangana. Njodzi dzavo dzakanyanya kukwirira uye dzinoda ruzivo rwakakura rwemisika yemari. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvakakosha nei usingafanire kubvumirana navo kana iwe usiri kuda kuve nezvinetso kubva zvino zvichienda mberi. Chero zvazvingaitika, hauzoshayikwa nemikana yekuvapo mumisika yezvemari yeimwe yenyika dzine simba kwazvo dzichiri kusimukira pasi rose. Kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyange kwakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Brazil yakanaka kune epasi rese misika yemasheya
5 makiyi ayo musika wekutengesa unozotsamira pa2019
Tengesa kana kumirira pamusika wemusika?